Barcelona iyo AC Milan oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig baxsad ka ah Manchester City – Gool FM
Barcelona iyo AC Milan oo ku dagaallamaya saxiixa xiddig baxsad ka ah Manchester City
(Manchester) 23 Agoosto 2021. Inkastoo Manchester City ay si aad ah ugu mashquulsan tahay inay soo xero geliso Harry Kane oo Tottenham u ciyaara, misena waxaa dhinaca kale naadiga gadood ka ah xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Bernardo Silva kaasoo doonaya inuu ka dhaqaaqo Citizens.
Kooxaha Barcelona iyo AC Milan ayaa il gaar ah u leh xaaladda mustaqbalka kubbad sameeyaha reer Portugal iyagoo doonaya inay gacanta ku dhigaan saxiixiisa haddii ay Man City iibineyso laacibkan sida laga soo xigtay Le10 Sport.
Macallinka kooxda reer England ee Pep Guardiola ayaa xaqiijiyay in Silva uu xagaagan doonayo ka tagista garoonka Etihad sidoo kalena Man City ay qiimeyneyso rabitaankiisa haddii uu codsi rasmi ah isla markaasna ku aaddan in la fasaxo uu u gudbiyo maamulka naadiga.
Si kastaba ha ahaatee, Milan iyo Barca ayaa diyaarinaya dalabaadka ay ugu dhaqaaqayaan saxiixa 27-sano jirkan kaasoo ay wali afar sano kaga harsan tahay qandaraaska uu kula jiro kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League.
RASMI: Kooxda Bayern Munich oo heshiiska u kordhisay mid ka mid ah xiddigaheeda